Ku soo dhawaada website-kayaga iyo mahad booqashadeeda. Our site waa dhan oo ku saabsan wax kasta oo giraangiraha, dheeraad ah oo si gaar ah, giraangiraha motoorka! Waxaan ku talo lagu siiyo macluumaad ugu fiican ee baabuurta iyo adeegyada.
Hal shey oo aan diirada saari doontaa inta badan waa wax iibsiga baabuurta la isticmaalay, haddii ay tahay baabuur ama gaari xammuul, mooto, ATV ama RV iyo sida ugu fiican loo ilaaliyo naftaada. Badan oo dhan waxyaalahaas oo kale waxay khuseeyaan dhammaan oo ka mid ah baabuurta kor ku xusan marka wax gadashada gaari loo isticmaalay, halka la RV ayaa waxaa laga yaabaa in wax yar ka badan aad u baahan tahay si aad u hubiso.
Waxaa jira tallaabooyin dhowr ah waa in aad qaadato wax gadashada gaari loo ama gaari. Ma aad homework by reading dib u eegista gaari macaamiisha iyo warar gaari macaamiisha. Waydii dadka aad la shaqeeyo iyo saaxiibada ku saabsan noocyada baabuurta kala duwan. Ku soo wada ururiya macluumaad ku saabsan isticmaalka gaaska ee ka samaysay iyo moodeelka aad xiisaynayso inaad iibsato. Hubi ratings isku hallayn karo gaari kasta oo loo xisaabiyo dadka costs.Most ka ogahay in iibsato gaari loo isticmaalo waa sida uu diidanaa laadhuuga. Si kastaba ha ahaatee, soo socda tallaabooyinka liis baabuurta la isticmaalay waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad naftaada ilaaliso, lacagtaada iyo caawin loo yareeyo khataraha.
Waxaa jira farabadan oo waxyaalaha waajibka ku ah inay la qiimeeyaa oo la hubiyaa on auto loo isticmaalo in aad ayaa ka fiirsaneysa inay wax gadashada. Eeg gaariga ka badan, ma u baahan tahay Taayirada? Ma aragno baro saliidda dhulka hoostiisa? Imtixaanka baabuurka, marka aad codsaneyso biriiga, baabuur aanu la isqabsan lahaa si hal dhinac ama ka kale? Haddii aadan eegto waxyaalahaas iyo kuwo kale oo badan waxa aad ku kici karaan maal sixun. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan si ay u eegaan in liis baabuur aad loo isticmaalo in aad naftaada u samayn kartaa waa in lagu hubiyo taariikhda gaariga.
Gadashada baabuur pre-leedahay ama ay gaari way ka duwan tahay ma in aad iibsato xisbiga gaar ah ama kuwa iibiya baabuurta la isticmaalay ah, marka laga reebo xaqiiqada ah in aad ku bixin kartaa in ka badan gaariga ka lagu iibiyo oo a. Iibiya baabuurta la isticmaalay sida caadiga ah mid ka mid ah farsamo si ay u isticmaalaan ah liis baabuur la isticmaalay si ay u baadho oo loo hubiyo baabuurta la iibsaday kabta ama kaga baayacmushtari, ka dibna go'aan ka gaadho haddii baabuurta la iibin karaa oo qaybtoodii ama ma. Qaar ka mid ah baabuurta in ay kaga baayacmushtari jireen, oo waa dhameystiran junk la iibin doono xaraashka, iyo qaar ka mid ah la iibin doonaa wax badan ka ganacsada. Iyo haa, xataa baabuurta in ay leeyihiin arrimaha iyo dhibaatooyinka farsamo la iibin doono badan lagu iibiyo oo iyo waxaa laga yaabaa inaad ka mid ah in kor u dhamaado iibsato mid ka mid ah kuwa baabuurta in uu leeyahay dhibaatooyin. Ask the dealer to show you a vehicle condition report that they have preformed on the vehicle, ama warbixinta xaalad gaari oo ay soo iibsatay baabuurka aad tixgelineysid inaad iibsato.
Baabuurta la isticmaalay iib by ganacsiga gaarka loo leeyahay (iib by Milkiilaha) waa in aad u soo jiidasho iibsada kara sababtoo ah fikirka ah in gaariga ayaa si fiican u daryeel qaaday ee uu mulkiilaha, iyo in ay ka heli karaan gorgortan dhab ah, haddii ay si toos ah u iibsan milkiilaha marka loo eego gawaarida iyo baabuurta in waxa lagu iibiyaa by iibiyayaasha baabuurta la isticmaalay. Dadka iibiya ay gaari on iyaga u gaar ah oo aan haysan dhamaan kharashka in lagu iibiyo oo uu leeyahay. Tani waxay u ogolaaneysaa baabuurta la isticmaalay in ay yihiin iib milkiilayaasha in ay lacag badan oo dhan in ka yar baabuur la mid ah ee lagu iibiyo oo baabuur loo isticmaalay.
Inkastoo iibsashada ka shaqsi gaar ah in ka badan wax yar khatar noqon kartaa. You need to be concerned with whether or not the odometer has been tampered with. And with an private seller and a dealership you need to be concerned whether or not the vehicle has been in a bad accident or not. Oo iibiyaha ah ee gaarka loo leeyahay, waxay run ahaantii baabuurka leedahay (waxaa gaariga la xaday)?
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aad samayn karto si aad iskaga ilaaliso kor ku xusan waa in ay online Taga oo gaariga online. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad sheegtid in ay odometer faragalin, shilalka waaweyn iyo haddii gaariga la xado ama aan.
Ugu dambayntiina, mid wax aad samayn lahaydeen oo intaadan gadan gaariga lagu weydiin haddii aad qabto karaa gaariga hubiyaa baxay aad makaanik. Waxaan rajeyneynaa in aad leedahay makaanik in aad ku kalsoon tahay oo ku siin doonaa baabuurka wanaagsan hal mar ka badan iyo inaad ugu Digtid Maka wax walba oo dhibaato ka iman kara.
Hay goobta sida ay hoos dhismaha oo aan si joogto ah ha la xariirta doonaa oo ku siin doona macluumaad qiimo leh.
Halkan waa video weyn waxaan ka helay in ku siinayaa macluumaad qiimo leh, waayo, waxyaalaha la raadiyo marka aad ku soo iibsato baabuur loo isticmaalay –